Soomaaliya waxay gashay Xaaladdii ugu xumeyd abid | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Inta laga war qabo Soomaaliya taariikhdeeda intaan oo dhibaato mar ay is biirsadeen oo dalka oo dhan uu galay xaalad sidan oo kale u cakiran marna ma jirto, dad badan oo falanqeeya arrimaha Soomaaliya waxay tilmaameen in xaaladda maanta lagu jiro oo kale uusan dalku soo marin marnaba.
Dalku wuxuu galay xaalad adag oo abaaro ah, deegaano badan oo Soomaaliya ka mida dad ayaa loogu dhimanayaa cunno iyo biyo la'aan! iyadoo ay abaaraha sanadakani ugu wacan yihiin roobabkii sanadkan oo yaraaday, deegaano badan aysan kaba di'in wax roob ah, halka goobaha qaarna ay yaraadeen, waxaana laga soo sheegayaa xaalad bani'aadanimo tii ugu xumeed meelaha qaar.
Dalka Soomaaliya iyo guud ahaan adduunka oo dhan waxaa ka dillaacay caabuq saf-mar ah kaasoo loogu magac daray COVID-19, waxaa udhintay dad fara badan oo Soomaaliya ku sugan, dadka da'da ah ayaa ugu daran kuwa u dhimanaya xanuunkan oo markiisii labaad kusoo laba-kacleeyay Soomaaliya guud ahaan.
Degaanno badan oo Soomaaliya kamida waxaa sii kordhaya dhibaatada amni darro ee ka jirta, deegaano badan oo kamida kuwa ay abaaruhu saameeyeen waxaa uga sii daran amni-darro, iyadoo ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dadka iyo dowladda Soomaaliyeed, waxayna baadkii iyo biyihii u diideen degmooyin ka tirsan gobollada Dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, waxayna go'doomiyeen tuulooyin ay dad badan oo dan yar ahi ku nool yihiin.
Intaas oo dhibaato is biirsaday waxaa uga sii daran muran siyaasadeedka xilligan ku soo aaday, iyadoo dalku uu doorasho gali lahaa xilligan, ayaa weli la isku mari la'yahay arrimaha doorashooyinka, waxaana loo kala jabay laba dhinac, qolo dowladda Taabacsan oo dooneysa in doorasho ku shubasho ah ay dhacdo, iyo qolyo is biirsaday oo kasoo hor jeeda kushubashada doorashada.